Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo Welsh nke Cardiff | Bezzia
Ihe ị ga-ahụ na obodo Welsh nke Cardiff
Susana Garcia | 31/03/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
La Welsh obio Cardiff nwere ebe akụkọ ihe mere eme kamakwa site na mpaghara oge a. Ọ bụ isi obodo Wales na obere obodo, enwere ike ịga ụkwụ na obere oge, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu nkwụsị ụbọchị ole na ole. Ihe mgbochi mbu nke di na mpaghara a malitere site na oge ndi Rom ma rue ta, odibe ya ka edobere ulo uku ya di ebube, nke bu ot’ime ihe di nkpa ma di nkpa.
Nke a obodo nwere ọdụ ụgbọ mmiri, nke mere ka ọ bụrụ ebe ọrụ dị ike. Na mgbakwunye, n'oge Mgbanwe Ọchịchị Ọrụ ọ toro nke ukwuu, ebe ọ ghọrọ isi ụzọ maka ọka ala Britain, isi okwu. Taa ọ bụ obodo raara onwe ya nye karịa maka njem nleta na-enye anyị ọtụtụ ebe iji hụ.
1 Cardiff nnukwu ụlọ
2 Cardiff nnukwu ọnụ ụlọ obodo
4 Ogige Bute
Cardiff nnukwu ụlọ
Nke a bụ isi okwu kachasị mkpa iji hụ na obodo Cardiff. Nnukwu ụlọ ahụ nwere mmalite Norman, ọ bụ ezie na emezigharịrị ya oge. Imirikiti nhazigharị bụ n'ihi ndị emere na narị afọ nke XNUMX ka ị wee nwee ike ịhụ ụdị eclectic ụfọdụ. Nnukwu ụlọ ahụ na-anọdụ n’elu obere ugwu ma na-enye ọmarịcha nleta, yana ntuziaka ọdịyo dị. Enwere ike ịhụ ihe osise fresco, ihe owuwu osisi na ime ụlọ dị iche iche ga-eju anyị anya na ngwakọta ha. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịrịgo Clọ Elu Elekere iji kporie echiche.
Cardiff nnukwu ọnụ ụlọ obodo
Obodo ulo bu a nnukwu ụlọ na-adọta uche, na mmalite narị afọ nke iri abụọ. Enwere ike ịga leta n'ime ime ụlọ ndị mepere emepe, yabụ ọ nwere ike ịbụ nleta na-atọ ụtọ. Nwere ike ịhụ ebe akpọrọ Marlọ Marble nwere ihe osise nke ndị dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme Welsh. O kwere omume na anyị nwekwara ike ịhụ seelọ Kansụl ma ọ bụ ụlọ ezumezu, ụlọ ndị ejiri oke nlekọta chọọ mma.
Lọ a dị n'akụkụ Halllọ Nzukọ Obodo Cardiff, ya mere enwere ike ileta ya n'egbughị oge. Ọ bụ ụlọ nke neoclassical osisi nke nwere ihe ngosi nka nke mba. Ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nke anyị na-ahụ ọtụtụ ngosipụta dị iche iche, yabụ na ọ na-abụkarị nke zuru oke isoro ezinụlọ na-enwe ọ andụ na agụmakwụkwọ. Anyị nwere ike ịchọta site na ngosipụta nke sayensị sayensị ma ọ bụ zoology na ọrụ dị mkpa nke ndị edemede dị ka Van Gogh ma ọ bụ Rodin. E nwekwara mpaghara maka ụmụaka, yabụ na ha nwere ike ịnụ ụtọ sayensị na-arụ ọrụ na-atọ ụtọ.
na obi Cardiff anyị hụrụ Bute Park dị ebube, ogige obodo mepere emepe nke mara ezigbo mma na nso nnukwu ụlọ ahụ na-agbatị n'akụkụ Osimiri Taff. Ebe zuru oke iji zuru ike ma mee ụzọ dị iche iche na-agafe na ya, ụkwụ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. N'ime etiti ya enwere ohere agụmakwụkwọ iji mụtakwuo banyere ahịhịa na ụmụ anụmanụ na ogige ahụ.
Obodo a bụ obodo Victoria ebe enwere ọtụtụ azụmaahịa n'ihi ọganihu na Industrial Revolution. Taa, anyị nwere ike ịchọta veranda Victorian nke ka na-arụ ọrụ na ebe azụmahịa maka ịzụ ahịa, ugbu a na-enyekarị ndị njem ohere. Ma Royal Arcade bụ gallery kacha ochie nke ndị nọ n'obodo ahụ na nke nwere ụdị okomoko. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mara mma na ebe kachasị mma ịchọta ihe maka ịchọ mma ma ọ bụ ihe ncheta ncheta Welsh mara mma, yabụ ọ nwere ike ịbụ otu isi njedebe nke nleta iji zụọ ahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mụtakwuo banyere Wales gastronomy site na obodo ị nwere ike ịga ahịa dị n'etiti. Buildinglọ ụlọ ndị Victorian nwere uko iko dị mma nke ukwuu ma n'ime ya anyị nwere ike ịchọta ihe niile site na akwụkwọ nke aka abụọ na ụdị nri niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Ihe ị ga-ahụ na obodo Welsh nke Cardiff
Mfe mara mma hacks ga-azọpụta gị ụbọchị
Otu esi elekọta ahụike nke anụ ahụ gị